नेबिसंघको विवाद मिल्यो, आजबाट बन्द सत्र सुरु ! - Arthatantra.com
नेबिसंघको विवाद मिल्यो, आजबाट बन्द सत्र सुरु !
काठमाण्डौं । प्रतिनिधि विवाद हल भएसँगै नेविसंघको महाधिवेशनको बन्दसत्र विहीबारदेखि सुरु हुने भएको छ। ११ जिल्लामा विधिवत् अधिवेशन नगराई भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि सहभागि गराईएपछि उत्पन्न विवादले बन्द सत्र सुरु हुन सकेको थिएन। आइतबार उद्घाटन भएर रोकिएको महाधिवेशनको बन्द सत्र बिहीबारदेखि सुरु हुने जानकारी नेविसंघका अध्यक्ष रंजित कर्णले दिए।
कर्णका अनुसार महाधिवेशन थप तीन दिन लम्बिने भएको छ। विहीबार बन्द सत्र सुरु गर्ने र निर्वाचनका लागि मतदाताहरुको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम छ। शुक्रबार मनोनयन दर्ता गरी २९ गतेमात्रै निर्वाचन हुने भएको छ। महाधिवेशन तीन दिन लम्बिदा संघलाई करिव डेढ करोड रुपैयाँको आर्थिक व्ययभार बढेको कर्णले बताए। यसअघि बुधबारसम्मका लागि मात्रै भोजन र आवासको व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले महाधिवेशन जति लम्बिए पनि पार्टीले खर्च बेहोर्ने बताएपछि संघले थप तीन दिनका लागि आवास भोजनको व्यवस्था गरीसकेको छ।
विधिवत् महाधिवेशन नभईकनै भागबण्डाका आधारमा छनोट भएका ११ जिल्लाका प्रतिनिधिको विवाद मिलाउन झन्डै एकसाता लाग्यो। नेविसंघ केन्द्रीय कार्यसमितिले विवाद मिलाउन नसकेपछि माउ पार्टी कांग्रेसले सवै विवाद हल गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न केन्द्रीय सदस्य प्रकाशरण महतको नेतृत्वमा निर्देशन समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट गोविन्द भट्टराई र गुरु घिमिरे थिए। सभापति देउवाले आफ्नो पक्षबाट महतका अतिरिक्त किशोरसिंह राठौर र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट प्रदिप पौडेललाई राखेका थिए। नेविसंघका वर्तमान अध्यक्ष रंजित कर्ण र ऋषिकेशजंग शाह समूहबीच अधिवेशन नभएका ११ जिल्ला र स्ववियू निर्वाचन नभएका क्याम्पसमा भागबण्डाका आधारमा प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । नेविसंघ अध्यक्ष कर्ण पौडेल र शाह सभापति देउवा पक्षीय हुन्।
१३ औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा तेस्रो धार जन्माएका पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्ष अधिवेशन नै नभई दुई पक्ष बीच (देउवा र पौडेल) भागबण्डाको आधारमा आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिन नहुने पक्षमा लाग्यो।
२७ साउन २०७३, ८।३०
वि.सं.२०७३ साउन २७ बिहीवार ०९:१३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे १ करोडमा बनेको साइन्स फिक्सन फिल्म बिजुली मेसिनको टिजर सार्वजनिक !
पछिल्लाे अब ईपीएसका परीक्षार्थीले परीक्षाकै दिन नम्बर हेर्न पाउने !
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको बढोत्तरी, सम्हालिने प्रयास गर्दै लगानीकर्ता
वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १५:२६
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारमा निकै उतार चढावकाबीच सेयर बजारमा...
लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटक आगमन ८४.०७ % ले घट्यो, होटलको संख्या १५.२७ प्रतिशतले बढ्यो
वि.सं.२०७८ असोज ५ मंगलवार १४:४३
काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्याङक अनुसार लुम्बिनी...